Ny Xiaomi Mi Note 10 dia ofisialy ary ho avy tsy ho ela | Androidsis
Mandritra ny herinandro vitsivitsy Tonga any aminay ny tsaho momba ny Xiaomi Mi Note 10. Izy io dia ho maodely vaovao eo anelanelan'ny marika sinoa, izay nandrasana ho tonga amin'ny faran'ny volana ity. Hatreto dia tsy mbola nanamarina na inona na inona ny marika, fa nanamafy ihany izy ireo ny fisian'ny telefaona amin'ny tambajotra sosialy.
Ankoatry ny fanamafisana fa tena misy io Xiaomi Mi Note 10 io dia mamela anay data maromaro manan-danja momba ny telefaona izy ireo. Ireo data ireo koa dia manome antsika ny fahatsapana fa ity telefaona vaovao an'ny marika sinoa ity ho lasa kinova iraisan'ny Xiaomi CC9 Pro izy io, izay haseho amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela.
Amin'izao fotoana izao dia voamarina fa Ny Xiaomi Ni Note 10 dia tena izy ary ho tonga amin'ny fakan-tsary miverina miisa dimy. Anisan'ireo fakantsary ireo no ahitantsika ilay sensor 108 MP lehibe, izay mampanantena fa ho iray amin'ireo singa kintana amin'ity telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa ity. Famaritana sasantsasany izay efa mahazatra antsika.
Mampahafantatra ny fakantsary Penta 108MP VOALOHANY. Manomboka izao ny vanim-potoana fakantsary fakan-tsarimihetsika finday vaovao! # MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL
- Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) Oktobra 28, 2019
Hatramin'izay indrindra ny Xiaomi CC9 Pro dia hanana sensor 108 MP lehibe, araka izay voalaza nandritra ny herinandro maromaro. Ankoatr'izay, tao anatin'ny ora farany dia voamarina fa hanana fakantsary miisa dimy ity telefaona ity. Toa io fitaovana io ihany no resahina.
Noho izany, ny zava-drehetra dia manondro izany ny Xiaomi Mi Note 10 no ho ny kinova iraisampirenena an'ny CC9 Pro. Any Sina ihany no misy io laharana io, raha anarana hafa kosa no nampiasaina tamin'ny fanombohany iraisam-pirenena. Toe-javatra iray izay toa mamerina ny tenany amin'ity tranga ity indray.
Tsy voalaza tao amin'ny fotoana hanehoana an'ity Xiaomi Mi Note 10. ity dia manolotra izany ny tsaho ny CC9 Pro dia haseho amin'ny 5 Novambra. Ka mety amin'ny andro iray anaovana azy ity modely ity ho ofisialy. Tsy maintsy miandry ny orinasa hanome antsika vaovao misimisy kokoa momba izany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi dia manamafy ny fisian'ny Mi Note 10